မကြာခင်သားလေးနောက်တစ်ယောက် ထပ်မံပိုင်ဆိုင်ရတော့မယ့်အကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေကို ဝမ်းသာအားရအသိပေးလာတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း – CHAR TAKE
ပရိသတ်ကြီးရေ MMA ချန်ယီယံ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော် အောင်လအန်ဆန်း ကတော့ လတ်တလောမှာ နောက်ထပ် ရင်သွေးရတနာလေးတစ်ယောက်ကို ထပ်မံ ပိုင်ဆိုင်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြ လာခဲ့ပါတယ်။
အောင်လကတော့ လက်ရှိမှာ သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အောင်လရဲ့ ဇနီးမှာတော့ နောက်ထပ်ရင်သွေးလေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် ထားရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာပါပဲGender Reveal ကိတ်လေးကိုခွဲတဲ့ ဗီဒီယို လေးကိုတင်ကာ “We’ve got another boy due in August. The N Sang family is truly blessed. “ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရင်သွေးလေးကတော့ သားယောက်ျာလေး တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရှိရပြီး ရင်သွေးလေးကိုတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လမှာ မွေးဖွားသွားမှာလို့လည်း သိရှိရပါတယ် ။ ပရိသတ်ကြီးရေ နောက်ထပ် သားယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်တော့မယ့် ဖေဖေ အောင်လအတွက် ဂုဏ်ပြု စကားလေးတွေပြောပေး ခဲ့ကြပါဦးနော် ။ Crd
Zawgyi … မႀကာခင္သားေလးေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္မံပိုင္ဆိုင္ရေတာ့မယ့္အေႀကာင္း ပရိတ္သတ္ေတြကို ဝမ္းသာအားရအသိေပးလာတဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္း
ပရိသတ္ႀကီးေရ MMA ခ်န္ယီယံ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ပရိသတ္ အခ်စ္ေတာ္ ေအာင္လအန္ဆန္း ကေတာ့ လတ္တေလာမွာ ေနာက္ထပ္ ရင္ေသြးရတနာေလးတစ္ေယာက္ကို ထပ္မံ ပိုင္ဆိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သူ႔ရဲ့ လူမွုကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကေန မၽွေဝေဖာ္ျပ လာခဲ့ပါတယ္။
ေအာင္လကေတာ့ လက္ရွိမွာ သားတစ္ေယာက္ သမီးတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ဖခင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး ေအာင္လရဲ့ ဇနီးမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ရင္ေသြးေလးကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ထားရၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာပါပဲGender Reveal ကိတ္ေလးကိုခြဲတဲ့ ဗီဒီယို ေလးကိုတင္ကာ “We’ve got another boy due in August. The N Sang family is truly blessed. “ ဆိုတဲ့ စာသားေလးနဲ႔အတူ ပရိသတ္ေတြကို အသိေပးခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ရင္ေသြးေလးကေတာ့ သားေယာက္်ာေလး တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လို့လည္း သိရွိရၿပီး ရင္ေသြးေလးကိုေတာ့ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လမွာ ေမြးဖြားသြားမွာလို့လည္း သိရွိရပါတယ္ ။ ပရိသတ္ႀကီးေရ ေနာက္ထပ္ သားေယာက္်ားေလး တစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ့မယ့္ ေဖေဖ ေအာင္လအတြက္ ဂုဏ္ျပဳ စကားေလးေတြေျပာေပး ခဲ့ၾကပါဦးေနာ္ ။ Crd